Fananan-jo… maharaikitra adidy - ewa.mg
Fananan-jo… maharaikitra adidy
News - Fananan-jo… maharaikitra adidy
mampiaka-peo hatrany ny hoe mpanohitra ny amin’ny fananan-jo
hiteny, haneho hevitra, hamory vahoaka. Voalaza fa zo fototra
izany, nefa mitaky adidy aman’andraikitra ihany koa. Tena mba atao
sy vitan’izy ireo ve izay? Anisan’izany, ohatra, ny fitaizana ny
mpikambana ao aminy, raha misy: be ny tsy manana mpikambana amin’ny
antoko misy azy akory hatrany ifotony.
Eo koa ny fandraisana anjara isaky
ny fifidianana fa tsy mikisina manohana izay matanjaka
hahazoan-toerana: rehefa tsy mahazo, miverina ho mpanohitra.
Miara-dalana amin’izany ny fiomanana handray fahefam-panjakana
amina foto-kevitra sy fandaharanasa ary paikady fanatanterahana
mazava, ny fandresen-dahatra ny olom-pirenena amin’izany
handatsa-bato ho an’ny tena amin’ny fifidianana manaraka…
Atao sy vitan’izy ireo ve izany,
raha tsy hilaza afa-tsy izay? Mampiaka-peo lava amin’ny hoe
fananan-jo haneho hevitra sy hihetsika. Toy ny manana olona maro
iny ao an-damosina raha sakantsakanana amin’ny fanakorontanana.
Nony avela malalaka, zara raha mahajoro sy maharitra amin’izay
lazainy sy ataony. Matoa nahomby ny hoe hetsiky ny vahoaka, mby
amin’izay tsy zakany… hararaotin’ny sasany.
Faly mamerina izay mahazatra hoe
mahomby? Fanakorontanana, fandravana… rehefa tsy mahaovoka amin’ny
hoe fiaraha-mitantana. Tsy misy antony anaovana fifidianana, raha
tsy avela hamita ny fe-potoam-piasan’ny mpitondra. Raha tsy
amin’izay tsy nifanarahana amin’ny tsy famitana izay
nampanantenaina, sanatria, ka tsy zakan’ny vahoaka intsony:
iandrasany ny farany, na ihetsehany avy hatrany.
Izany rehetra izany no anisan’ny
mankaloiloy ny maro amin’ny fomba fanaovana politika? Tsy mianga
amin’izay tena hetaheta ifotony fa izay hahazoan-toerana fotsiny,
anaovana ny fahasarihanam-bahoaka ho fitaovana politika enti-miady
sy mitady. Mbola mandaitra sy mahomby ve izany, raha tsy mahavita
izay adidy aman’andraikiny ny mpanohitra amin’ny hoe zo ananany
isaky ny mihetsika?
L’article Fananan-jo… maharaikitra adidy a été récupéré chez Newsmada.
Basikety – “Tournoi des Elites 3×3”: hotsongaina ireo handrafitra ny ekipam-pirenena
Hiditra amin’ny fifantenana farany, ho an’ireo handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, ny komision’ny basikety lalaovina olona telo, miaraka amin’ny tale teknika nasionaly. Hotanterahina, etsy amin’ny « parking »-n’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, ny asabotsy 27 sy ny alahady 28 avrily ho avy izao, ny andiany voalohany amin’ny “Tournoi des Elites”, basikety lalaovina olona telo (3 x 3). Mpilalao 32 lahy sy 32 vavy ny hiatrika izany. Nambaran-dRandrianarisoa Riana, tomponandraikitry ny komisiona, fa hiady ny lohany ireo sangany indrindra, notsongaina, nanomboka ny taon-dasa. Tanjona ny hifantenana ireo handrafitra ny ekipam-pirenena, hiatrika ny « Lalao afrikanina », any Maraoka ny aogositra ho avy izao, sy ny fiadiana ny ho « Tompondakan’i Afrika », any Egypta, ny novambra 2019.Hahazo 500 000 Ar ny tompondakaHozaraina ao anaty sokajy valo ireo mpilalao ireo ka mitsinjara ny iray tarika ny tale teknika nasionaly sy ny ekipany. Zava-dehibe ny fanatontosana ny “tournoi” toy izao, araka ny nambaran’i Angelot, tale teknika nasionaly. Mila manana isa ny mpilalao tsirairay eo anivon’ny federasiona iraisam-pirenena hahafahana miatrika ireo lalao any ivelany. Mbola vitsy ireo mpilalao manana isa 100. Ho an’ny lehilahy : i Fabrice, i Ricky, i Arnol, i Livio, i Steve ary i Walter. I Sarobidy sy i Murielle kosa ny eo amin’ny vehivavy.Manohana ny fifaninanana ny Telma ka hanolotra 500 000 Ar ho an’ny tompondaka. 300 000 Ar ny an’ny faharoa ary 200 000 Ar ny fahatelo. Hanome 150 000 Ar ho an’ny fahefatra kosa ny federasiona. Hiantohan’ny Star ny rano fisotro ho an’ny ekipa tsirairay. Torcelin L’article Basikety – “Tournoi des Elites 3×3”: hotsongaina ireo handrafitra ny ekipam-pirenena a été récupéré chez Newsmada.
Fikasihan-tànana tetsy Ampitatafika : LP ilay Kaomisera, MD eny Antanimora ny zanany
Nahazo fahafahana vonjimika ilay komisera ary nidoboka am-ponja eny Antanimora kosa ny zanany. Niakatra fampanoavana omaly ilay raharaha fandratrana olona tetsy Ampitatafika, tao amin’ny « parking » iray ny 5 jiona lasa teo. Tsy nanaiky ilay olona naratra ary nitory teo anivon’ny fampanoavana ary ny polisy koa dia nanokatra fanadihadiana anatiny avy hatrany momba ity raharaha ity. Tao anatin’izay fotoana izay koa anefa dia nametraka fitoriana izy mianaka ary dia samy nohenoina omaly teny anivon’ny fampanoavana, izany hoe na ny andaniny na ny ankilany;izay voakasiky ny dosie. Niteraka resa-be ity tranga tetsy Ampitatafika ity, ary nanampy betsaka tamin’ny nahafantarana ny zava-nisy ny tambajotra sosialy. Fotoana fohy taorian’ny nisehoan’ny herisetra mantsy, avy hatrany dia nitantara ny nanjo azy ilay rangahy izay naratra sy voatery niditra hopitaly. Isan’ny notsipihany ny fahamamoan’ireo olona izay nikasi-tànana azy ary koa ny ompa variraraka. Raha tsiahivina, disadisa tsotra izy tsy tokony ho niafara tamin’ny fidarohana no nitranga. Tao amin’ny toerana fametrahana fiara mahazatra no nifanao aloha sy aoriana ny fiara roa dia ilay nitondra ny komisera sy ny zanany ary olon-kafa sy ny fiaran’ilay olona izay hitady ny fitoerany ao. Raha somary nitohana ilay làlana satria mbola eo am-pijerena ny hametrahana azy ny ankilany, tezitra mafy ny andaniny. Raikitra ny ompa avy amin’ny « klaxon ». Teo no nanomboka ny gidragidra satria raha ny filazan’ny mpitory voalohany dia fikasihan-tànana avy hatrany no nanjo azy raha mba nangata-panazavana momba ilay ompa izy. Afak’omaly raha araka ny re no efa saika niakatra fampanoavana ny raharaha rehefa vita ny fihaonan’ny Inspection Générale-n’ny polisim-pirenena ilay komisera. Tsy tontosa anefa izany raha tsy omaly rehefa nametra-pitoriana koa ilay kaomisera sy ny zanany. D.RL’article Fikasihan-tànana tetsy Ampitatafika : LP ilay Kaomisera, MD eny Antanimora ny zanany a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nanafika ben’ny Tanàna teo aloha: dimy ireo olona efa voasambotra
Tra-tehaky ny zandarimaria tao Erada, Ambovombe, ny olona miisa dimy. Jiolahy nanatanteraka mivantana ny fanafihana sy ny fitifirana ny ben’ny Tanàna teo aloha sy ny vadiny, ny alahady teo. Tsiahivina fa voatifitr’ireo jiolahy ireto olom-boafidy mivady ireto, niampy olona roa hafa ihany koa. Tonga teny an-toerana ny zandary nanao famotorana. Voasambotra taorian’izay ny olona miisa telo, voalaza ho isan’ireo olon-dratsy. Nony namonjy fodiana, ny ampitso marain’io ny zandary, nosakanan’ny fokonolona ny lalana. « Notakin’ireo andian’olona ireo ny hanajanonana ireo olona nosamborina fa hatao kabarin-drazana », hoy ny fanazavan’ny zandarimaria, loharanom-baovao. Taorian’izay, nidina teny an-toerana ny kolonely kaomandin’ny vondron-tobim-paritra sy ny governoran’Androy niresaka amin’ireo fokonolona.Tsy nijanona hatreo anefa ny famotorana ny raharaha. Vokany, olona roa hafa voasambotry ny zandary taorian’izay. « Disadisam-piarahamonina sy politika eo an-tanàna ny antony nahatonga izao tsy fandriampahalemana izao », hoy hatrany ny zandary. Henintsoa HaniL’article Nanafika ben’ny Tanàna teo aloha: dimy ireo olona efa voasambotra a été récupéré chez Newsmada.
Jirama: anisan’ny hahazo foiben-drano ny eny Itaosy sy Ambohidrapeto
Miezaka mamaha ny olana amin’ny tsy fahampian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny Jirama. Anisan’izany ny fisintonana rano avy any amin’ny renirano, diovina avy eo ary aparitaka any amin’ny mpanjifa avy eo.Maro ny toerana mijaly rano eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Hametraka foibe fanadiovan-drano ao anaty kaontenera ny Jirama ka toerana valo ny hananganana azy. Ao anatin’ilay tetikasa “Unité de traitement d’eau conteneurisé” ity famokarana sy fanadiovan-drano ity. Mampiavaka azy, ao anaty kaontenera manokana, ahitana ny fitaovana ilaina no hatao ny dingana rehetra takin’ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny fomba fanadiovan-drano.Sintonina avy any amin’ny renirano, toy ny eny Ikopa, ohatra, diovina ary alefa any amin’ny tambajotra mpitsinjara isan-tokantrano avy eo ny rano madio.Tanjaka 100 hatramin’ny 2.400 m3/oraNosantarina, omaly 30 septambra, ny fametrahana ny eny Ankadindratombo, hamokatra rano 2.400 m3 isan’ora, hamatsy ny kaominina Alasora. Notsinjovina koa ny eny Itaosy, anisan’ny tena mijaly rano efa an-taona maro ka toerana roa no hapetraka. Eny Ampasika (200 m3/ora) hamatsy ny eny Bemasoandro Itaosy sy eny Andohalafy Ankadimanga (200 m3/ora) hamatsy ny eny Ambohidrapeto sy Ankadimanga.Hamatsy an’Ambohimangakely sy ny manodidina ny foibe eny Amoronakona (100 m3/ora). Hamatsy ny eny Ampitatafika ny eny Anosizato (100 m3/ora). Eo koa ny eny Tanjombato (200 m3ora), Ivato (100 m3/ora), Sabotsy Namehana (100 m3/ora).Efa eto an-toerana daholo ireo kaontenera manokana fanadiovan-drano ireo ary miroso tsikelikely ny fametrahana azy.Manampy ireo hafaTanjona amin’ity tetikasa ity ny hanalefahana ny tsy fahampian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina sady hanatsarana sy hanamafisana ny tosiky ny rano. Tsiahivina fa efa mandeha ny fanitarana ny haben’ny famokarana rano eny Mandroseza sy ny eny Amoronakona. Heverina fa hanampy ny famahana ny olana ity fanadiovan-drano amin’ny kaontenera ity.Njaka AndriantefiarinesyL’article Jirama: anisan’ny hahazo foiben-drano ny eny Itaosy sy Ambohidrapeto a été récupéré chez Newsmada.
Atletisma: medaly volamena roa sy volafotsy efatra ny azon’ny Malagasy, omaly
Niditra an-tsehatra, nanomboka omaly, tao amin’ny kianjan’ny Germain Commarmond Bambou, eto Maorisy, ny taranja atletisma, ao anatin’ny andiany faha-10 amin’ny “Lalaon’ny Nosy”. Azo lazaina ho tsara ihany ny vokatra ho an’ny Malagasy satria nahazo medaly volamena miisa roa sy volafotsy miisa efatra ny efa eo am-pelatanan’ireo atleta nifaninana.Norombahan’i Molenjanahary Njarasoa Claudine (12.02) ny fandresena teo amin’ny famaranana, 100 metatra vehivavy. Mbola isika Malagasy ihany koa no nitana ny laharana faharoa, teo amin’ity sokajy ity, tamin’ny alalan’i Embony Elodie Vanessa (12.22). Teo amin’ny sokajy lehilahy kosa nahazo ny medaly volamena , i Mampitroatsy (30.37.88), teo amin’ny 10 000 metatra ary Andriamparany Fenosoa ny teo amin’ny faharoa (31.08.28). Ankoatra izay, medaly volafotsy avokoa ny norombahin’ny atleta malagasy, teo amin’ny famaranana, 1 500 metatra sy 110 metatra misy fefy, sokajy lehilahy hatrany. Niaro ny voninahi-pirenena nandritra ireo fifaninanana roa ireo Randrianantenaina Soazara Lahivokatse (3.56.63) sy i Mananjara Be Ibrhim (14.78). Mi.Raz Vokatra omaly Famaranana 100 m vehivavy: 1-Molenjanahary Njarasoa Claudine: 12.022-Embony Elodie Vanessa: 12.22Famaranana 10 000 m lehilahy: 1-Mampitroatsy: 30.37.882-Andriamparany Fenosoa: 31.08.28Famaranana 1 500 m lehilahy: 1-Dookun Mohammed (Mau): 3.56.632-Randrianantenaina Soazara Lahivokatse: 3.56.89Famaranana 110 m “haies” lehilahy: 1-Lararaudeuse Jeremie (Mau): 14.632-Mananjara Be Ibrahim: 14.78 L’article Atletisma: medaly volamena roa sy volafotsy efatra ny azon’ny Malagasy, omaly a été récupéré chez Newsmada.
Tsiahin’ ny 14 oktobra: nolokoina ranom-bolamena ny sarivongan’i Tsiranana
Niara-nientana ny sojabe, ny antoko PSD sy fikambanana samihafa ao Mandritsara nanatanteraka ny fankalazana mandritra ny andro maromaro ny faha-62 taonan’ny nahazoana ny Repoblika. Nolokoin’izy ireo ranom-bolamena ny sarivongan’ny filoha Tsiranana Philibert eny amin’ny lapan’ny Tanàna. Natodika miantsinanana koa ny sarivongan’ity nitondra ny Repoblika I ity tao Bazary sarety raha nianatsimo izany teo aloha. Nolokoina tahaka izany koa ny tany Marosely, toerana nahatsahan’ny tavoniny. Nanangana ireo sojabe telo ara-drazana araky ny fomba fanao tsimihety nentim-paharazana avy eo.Nitohy amin’ny fampiratiana mivelatra ny tantara an-tsary manodidina ny Repoblika I, iarahana amin’ny “Archiviste” Rakotobe izany, hatramin’ny 19 oktobra. Mitohy amin’ny valan-dresaka momba ny Repoblika I izany. Eo koa ny fifaninanana, toy ny “radio-crochet”, ny “Miss Tsimihety ary ny fampirantiana asa-tanana…Synèse R.L’article Tsiahin’ ny 14 oktobra: nolokoina ranom-bolamena ny sarivongan’i Tsiranana a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Lalao fanomanantena: raikitra ny lalaon’ny Barea sy ny Etalons-n’i Borkina Faso
Efa tsara petrapetraka avokoa ny fikarakarana rehetra amin’ny fiatrehana ny lalao firahalahiana hikatrohan’ny Barea de Madagascar sy ny Etalons-n’i Borkina Faso. Vonona ny ekipa roa tonta hiatrika izany.Tsy misy intsony ny ahiahy fa ho raikitra ny fihaonana eo amin’ny Barea de Madagascar sy ny Etalons-n’i Borkina Faso, ny alatsinainy 12 oktobra ho avy izao. Lalao hotontosaina ao amin’ny kianja El Jadida, Maraoka. Efa vita ny famandrihana ny hotely hivantanan’ny delegasiona malagasy, any an-toerana, ny alahady alina ho avy izao. Efa nalefa any Maraoka ihany koa ny fahazoan-dalana “visa” hidiran’ny Barea de Madagascar any an-toerana. Nambaran’ny tomponandraikitra iray eo anivon’ny federasiona malagasy (FMF) fa efa milamina sy mipetrapetraka avokoa ny zava-drehetra fa ny andro sy ny ora sisa andrasana, eo amin’io lalao firahalahiana io, izay andrasan’ny rehetra fatratra.Mialoha izany anefa, mbola hiatrika lalao sedra iray any Luxembourg ny Barea, amin’ity zoma 9 oktobra ity: ny fihaonana amin’ny Swift Hesperange, ekipa D1 any an-toerana. Efa any hatramin’ny alatsinainy rahateo ny ekipam-pirenena malagasy niatrika ny fiofanana sy ny fampivondronana, hiatrehana ireo lalao roa ireo, tafiditra ao anatin’ny fanomanantenan’ny Barea, amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny “Can 2022”, hikatrohana amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, ny 9 novambra ho avy izao, any Abidjan, sy ny lalao miverina hatao any amin’ny kianja Barikadimy Toamasina, ny 17 novambra 2020.Ankoatra izay, efa nandalo avokoa nanao fitiliana valanaretina Covid-19 ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar sy ny mpanazatra ary ireo ekipa teknika rehetra, omaly alakamisy. Fepetra takina ary tsy maintsy ataon’ny rehetra amin’ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, mialoha sy mandritra ary aorian’ny lalao.Tsiahivina fa efa any Luxembourg avokoa ireo mpilalao rehetra afa-tsy i Amada sy i Carolus, izay hihazo avy hatrany an’i Maraoka, ny alahady ho avy izao. Tompondaka L’article Kitra – Lalao fanomanantena: raikitra ny lalaon’ny Barea sy ny Etalons-n’i Borkina Faso a été récupéré chez Newsmada.
Harambaton-kevitra: hamakafaka ny fahamarinana ny Hetsika kristianina
Fikaroham-bahaolana. Hanao jery todika nefa hametraka ny ho avy. Hiompana amin’ny fahalovana sy ny fahamarinana indray ny fakan-kevitra iarahana amin’ny Hetsika fampiraisana kristiana ho an’ny firenena, hotanterahina ny 28 oktobra izao eny Faravohitra.Nialoha izany, nikarakara famelabelarana izy ireo, afakomaly. Nanasana ireo manam-pahaizana maro sy ny olom-pirenena tsotra. Niompanan’ny lohahevitra : « Ny 60 taona nahazoana ny Fahaleovantena. Betsaka ireo zavatra tsy mbola niova ». Nitarika izany ny mpandrindra nasionaly ity hetsika ity, Randrianasolo Arimino Tiana. « Tanjona ny ahafahana manangona ny hevitry ny tsirairay hijerena ireo lafitsaran-javatra tokony hotohizina sy hatsaraina. Mba ahafahantsika mampandroso ny firenena », hoy izy. Natsidiny koa anefa ny fitondrana ireo fomba fijery vaovao tokony hampitaina maika mba holovain’ny taranaka faramandimby. Manampy ireo ny tokony hijerena ny soatoavina malagasy mba hahafahan’izany miverina eny anivon’ny fiarahamonina sy ny firenena manontolo. Fanamby amin’izany handrafetana ny hevitra rehetra ka harindra ao anatin’ilay « Harambaton-kevitra », mbola hiampita amina lohahevitra maro hatramin’ny asabotsy 12 desambra izao.Synèse R.L’article Harambaton-kevitra: hamakafaka ny fahamarinana ny Hetsika kristianina a été récupéré chez Newsmada.
Les poteaux funéraires malgaches parmis les « objets d’art » malgaches dérobés. Aux dernières nouvelles, la restitution des objets d’arts africains dérobés par la France ne se fera pas de sitôt, malgré la promesse d’Emmanuel Macron faite en 2017. En cause, les collectionneurs et les musées qui pensent probablement que ces objets ne sont pas, à leur premier usage, des œuvres d’arts mais des butins de guerre. Des institutions comme le Quai Branly sont citées parmi les plus récalcitrantes à les remettre. De septembre 2018 à janvier 2019, ce lieu a abrité une exposition intitulée « Madagascar, art de la Grande Île ». Durant des mois, des objets d’arts malgaches, allant des sculptures funéraires, sûrement dérobées sur les tombeaux, des peintures et d’autres ont été fièrement installées. Cependant, il est fort probable que parmi ces centaines d’œuvres se trouvent des objets de larcins, de vols ou d’autres méthodes malhonnêtes de les obtenir. Si les pays africains ont réclamé leur restitution en 2018 et 2019, cette dernière a l’air de ne plus être d’actualité dans les projets des ministères ou départements culturels. Cependant, on parle ici de plus de dizaines de milliers de pièces à restituer. Des voix commencent à dénoncer la continuité du rapport de domination instauré jadis par les Français colons. Des Français qui, aujourd’hui, peinent à leur remettre leurs œuvres aux pays africains spoliés. Maminirina Rado L’article Diplomatie : La restitution des œuvres africaines dérobées est freinée est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Diplomatie : La restitution des œuvres africaines dérobées est freinée a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Taksiborosy: tsy ampiasaina ny seza afovoany
Tsy miova ny fepetra mikasika ny isan’ny mpandeha any anatin’ny taksiborosy sy ny taxi-be, na foana aza hamehana ara-pahasalamana. Nohamafisin’ny minisiteran’ny Fitaterana fa tsy azo atao ny manisy mpandeha eo anilan’ny mpamily fa iray ihany. Toraka izany koa, tsy azo atao ny manisy mpandeha eo afovoan’ny seza (strapotin). Ho mafy kokoa ny fanaraha-mason’ny fanjakana sy ny mpitandro filaminana ary ny tompon’andraikitry ny kaoperativa manoloana ireo voalaza ireo.Etsy ankilany, nitondra fanazavana koa ny minisitera tompon’andraikitra fa tsy ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety (ATT) intsony ny manao ny fitomboka any anatin’ny kahiebe “manifold”. Ny tompon’andraikitry ny kaoperativa isaky ny toeram-piantsonana indray no hisahana izany sy ny fandaminana rehetra. Tsiahivina fa tsy maintsy hita ao anatin’ity kahiebe ity ny anaran’ny mpandeha sy ny mombamomba azy, toy ny laharana kara-panondro, ny laharana finday, ny adiresiny ary ny toerana alehany.Njaka A.L’article Taksiborosy: tsy ampiasaina ny seza afovoany a été récupéré chez Newsmada.
Haintrano :: Ankizy 4 taona maty irery tao antranon-draibeny
Maty noho ny fahamaizana tao an-tranon’ny raibeny, tany Ankonabe-Analavory, ity ankizy lahy, 4 taona, afak’ omaly tokony ho tamin’ny 5 ora hariva. Tsy tao antranony itsy raibeny itsy fa nandeha namangy fahoriana tany amin’ny tanàna iray antsoina hoe Andranonatoho, tokony ho efatra kilaometatra miala an’Ankonabe tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza. Nanomboka tamin’ny 1 ora tolakandro teo ho eo ny firehetan’ny trano, araka ny fitantaran’ireo mponina teo amin’ny manodidina. Potika tanteraka ireo trano roa, izay vita amin’ny biriky ny iray. Samy mitafo bozaka avokoa izy ireo. Isan’ireo potika tamin’io firehetana io ny kahie fanisana omby an’ireo mponina ao anatin’ny fokontany. Lehiben’ny fokontany ao Ankonabe itsy lehilahy raiben’ny zaza namoy ny ainy itsy. L’article Haintrano :: Ankizy 4 taona maty irery tao antranon-draibeny est apparu en premier sur AoRaha.